Inter Milan oo Juventus ka dul qaadaysa Roberto Gagliardini – Gool FM
(Milano) 31 Dis 2016 – Inter Milan ayaa la sheegayaa inay ku tala jirto inay suuq-jiilaalka bisha Jannaayo ay Juventus €25m oo euro kaga dul qaaddo laacibka khadka dhexe ee Atalanta ee Roberto Gagliardini.
Sida uu dhigayo Tuttomercatoweb, hadda ayay laacibka ula diyaar tahay €25m, balse Sky Sport Italia ayaa meesha soo gelinaya caqabadaha dhaqaale wanaagga UEFA, taasoo keenaysa in ay laacibka amaahdaan muddo 6 bilood ah iyagoo deeto xagaaga wada iibsan doona taasoo weliba waajib ku noqonaysa inta kulan ee uu safto.
Si kastaba, Gagliardini wuxuu u muuqdaa mid ku biiraya safka Stefano Pioli ee Inter inta fasalkan ka harsan.
Juventus ayaa doonaysay wiilkan u safta da’yarta Italy Under-21 marka la gaaro xagaaga 2017, sidaa darteed bay Nerazzurri dalabka kusoo dhaqsatay.
Wiilkan 22-jirka ah ayaa 2 gool dhigay 13 kulan oo Serie A ah fasalkan, isagoo durba kasbaday in loogu yeero xulka waawaynka ee Talyaaniga.
Kooxaha Barcelona & AC Milan oo isku haysta daafaca Serge Aurier